आफ्नो ठाउँको विकास निर्माण गर्न नपाउने हो भने जनताले कति दिन सहलान् ? - Ujyaalo Nepal
आफ्नो ठाउँको विकास निर्माण गर्न नपाउने हो भने जनताले कति दिन सहलान् ?
By ujyaalo nepal	 On २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ०७:५९
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले ज्यामिरे सिरानमा राप्ती नदीको कटान रोक्न केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिरहे पनि काम शुरू हुनसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि तटबन्धका लागि रु.१२ लाख विनियोजन भएको छ। २८ पुस २०७८ मा भएको सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले २८ चैतभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ०७:५९